I-Secret Treehouse - I-Airbnb
Earlville, Queensland, i-Australia
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Thomas
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Eph 14.
Le 'Ikhaya Lesihlahla' elihle lakhiwe ukuze lincome indawo ezungezile ehlala ihlathi lemvula eliGugu Lomhlaba.
Yakhelwe ngale ndlela ukuthuthukisa ukubuka, ukuthatha umoya okhona futhi wengeze ubumfihlo. Futhi ukuxazulula inkinga yokwakha ezindaweni ezinemimango ukuze uhlale ngaphakathi kwemvelo.
Leli khaya elihlelwe kahle likuvumela ukuthi uhlale kuvulandi omkhulu phakathi kombhede wehlathi lemvula futhi uthathe ukubukwa okumangalisayo nezilwane zasendle, noma uze wehlele empophomeni yakho yangasese ukuze uthole i-paddle!
Awekho neze amaphathi, awekho imicimbi, akukho msindo wasebusuku nokuphuza. Lena indawo yomndeni ethule.
Yakhelwe ngo-1989 futhi yavuselelwa ngothando eminyakeni yamuva nje, lesi sakhiwo asikwazi ukuhambisana nendawo ezungezile yemvelo. Ikhaya lihlala ezigxotsheni ezinkulu ngokumelene nobuso bedwala elincane endaweni ephansi yehlathi lemvula elishisayo, lehla libheke empophomeni yalo yangasese.
Ngaphakathi, ikhaya linendawo yokuhlala eyanele, evulekile yohlelo, ikhishi elikhulu labapheki bezokuzijabulisa, idizayini ye-chic kanye ne-spa endlini yokugezela.
Intwasahlobo egeleza engadini iyisizinda somfula waseChinamans. Lo mfula udla intwasahlobo kusukela ezintabeni ezingenhla kweLake Morris, ugeleza unyaka wonke futhi unqamula eCairns wehle uze uyofika olwandle. Chitha isikhathi esincane emfudlaneni futhi ungaba nenhlanhla yokubona amaYabbies Amanzi Ahlanzekile, i-Guppy Fantails, i-Rainbow Fish kanye ne-Penny Turtles.
Ukuzipholele kuvulandi wesitezi sesithathu, ngombono ophelele we-canopy yehlathi lemvula, izimvemvane ezivamile ongazibona kungaba i-Ulyssess, Monarch noma i-Birdwing Species. Le ndawo ebukekayo futhi iyenza kube indawo enhle yokubalekela ababukele izinyoni ngokubonakala okuvamile kwezinhlobo ezilandelayo:
Isidla Uju Oluphuzi, I-Little Shrike Thrush, Black Butcherbird, Fairy Gerygone, Black Butcherbird, Spangled Drongo, Helmeted Friarbird, Varied Triller, Brush Turkey, McCleays Honey Eater, Torres Imperial Pidgeon, Woompoo Pidgeon, Little Bronze Cuckoo, Spotted Catbird, Victoria Inyoni, Sulfur Crested Cockatoo, Laughing Kookaburra, Orange Footed Scrubfowl, Bar Shouldered Dove, Bazza, Papuan Frogmouth Owl, Forest Kingfisher, Australian Swiftlet.
Kungakhathaliseki ukuthi uthanda ihlathi lemvula, izilwane zasendle noma ufuna nje ushintsho oluphumuzayo olusuka edolobheni, ngaphandle kokuba kude kakhulu, yenza le ndawo ibe yindawo yakho encane efanelekile yokuba wedwa.
ubusuku obungu-7 e- Earlville
into engcono kakhulu mayelana nale ndawo ukuzizwa ihlukanisiwe ngokuphelele endaweni ezungezile emangalisayo kodwa kusahamba imizuzu eyi-10 ukusuka edolobheni, okusho ukuthi unokufinyelela kalula kukho konke okudingayo.
Uzokwazi ukufinyelela endaweni yangasese kodwa angihlali kude ngakho ngishayelwa ucingo kuphela uma ungidinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Earlville namaphethelo